Microsoft yakaburitsa patent uye inoda kupinda zvizere mumusika weVR | Linux Vakapindwa muropa
Mumakore achangopfuura, chokwadi chakawedzerwa chakawedzera kusununguka uye chiri kuwedzera kukosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Makambani mazhinji uye mazhinji ari kushandisa zvinoshandiswa, kwete zvevashandi chete, asiwo zveveruzhinji.
Kuwedzera chokwadi kuri tekinoroji yakagadzirirwa kusanganisa rwekuwedzera ruzivo (zvinhu, mifananidzo, zvinyorwa ...) munguva chaiyo uye uzviise pachokwadi kuti uzvipfumise uye izvi, zvichipindirana.
Makambani mazhinji emagetsi ari kuisira mari zvakanyanya muchinhu chakawedzerwa. Microsoft inoda kuenda nhanho imwe kumberi muchikamu.
Yake ichangoburwa patent uye naye hofori yeRedmond inoda kushandisa zano nezve iyo pfungwa yenyika isingazivikanwe yechokwadi chakawedzerwa uko vashandisi nemabhizinesi vanogona kuwedzera ruzivo rwechokwadi kune chaicho-zvinhu zvepasi nenzvimbo uye nekugonesa vamwe vashandisi vechokwadi.
Patent yeMicrosoft inoda kubvumidza nharaunda yevashandisi vechokwadi vakawedzera vanogona kupfeka ngowani pavanotyaira, regedza vamwe vatyairi munharaunda nekusiya mhinduro pamaitiro avo.
Windows United, iyo Windows 10 uye Windows Nharaunda nharaunda, inoona pfungwa yacho ichityisa, asi Microsoft inoronga kuishandisa.
1 Microsoft inovavarira kuchinja driver driver
1.1 Kutaurirana, kurovera uye ruzivo pane vatyairi mu "chaiyo nguva"
Microsoft inovavarira kuchinja driver driver
Iyo Microsoft patent iyo inobvumidza kuongororwa kwevatyairi venharaunda yakawedzera yevashandisi yakavakirwa paHoloLens, iyo yekambani yakawedzera chokwadi headset yave ichiwanikwa kubva munaKurume 2016.
Mhinduro dzichabatsira vatyairi kunzvenga kutyaira zvikanganiso uye mhinduro kubva kunhengo dze nharaunda mune ramangwana.
Zvinoenderana nezvinyorwa zveMicrosoft zvinotsanangura patent panguva yekuburitswa:
“Kunovakirwa zvivakwa zvekutsigira nharaunda yevatyairi zvichibva pachinhu chakawedzerwa (AR). Maonero emutyairi wega wega (semuenzaniso, aine AR mudziyo) mune dzimwe mota mumugwagwa anogona kuwedzerwa neruzivo rwechokwadi nezve vamwe vatyairi munharaunda.
Vashandisi vemunharaunda vanogona kutaura zvavanofunga pamusoro pehunhu hwevamwe vashandisi venharaunda.
Wongororo dzevatyairi dzinogona kuunganidzwa uye kuenzaniswa kuwana kuwedzerwa kuongororwa kweimwe hunhu kune mumwe mutyairi.
Chiono chemutyairi pane yavo AR chishandiso chinozadzikiswa nenharaunda kuongororwa kweyekutyaira kwekutyaira kwekutyaira, izvo zvinogona kukanganisa maitiro emutyairi mune ramangwana. «
Ruzivo urwu, urwo inopfupikisa zvakataurwa nenhengo dzemunharaunda, zvinogona kuonekwa nemutasvi paakapfeka magirazi eAR, semuenzaniso.
Zvisinei, bvumidzwa yaMicrosoft inopfuura zvinotaurwa pamusoro pekufambisa kwevatyairi.
Kutaurirana, kurovera uye ruzivo pane vatyairi mu "chaiyo nguva"
Ruzivo rwunopihwa nenharaunda runogona zvakare, semuenzaniso, kuyambira mutasvi wenjodzi inomukomberedza.
Vatyairi vanogona zvakare kunyeverwa nepfungwa yezvinhu senge kumhanya kwavo kana imwe yakakosha telemetry, saWaze.
Waze inharaunda yeGPS inounza pamwechete mamirioni evashandisi kutenderera pasirese, nharembozha GPS yekushandisa iyo yakavakirwa pamepu inogona kushandurwa nevashandisi vayo.
Waze inokutendera iwe kuti udzivise tsaona, mabasa, kuwanda kwemotokari, ine ndangariro yekufamba iyo inokutendera iwe kupa vamwe vashandisi munharaunda ine nzira dzinonyanya kushandiswa nenhengo dzeboka.
Mumamiriro akasiyana siyana, eMotokari yemutyairi inogona kugadzirirwa kupa ruzivo rweAR uchityaira.
Iyo sisitimu inogona kupa telemetry yemotokari yemutyairi, iyo inopa ruzivo nezve nhengo dzenharaunda yakavakidzana uye mota dzadzo mumugwagwa.
Iyo sisitimu inogona kuwedzera maonero emutyairi enharaunda chaiyosemuenzaniso, kuburikidza nemuchina unotakurika unowedzerwa nezvinhu zvakasarudzika zvinoratidza ruzivo rwakagamuchirwa rwe telemetry.
Zvisinei, mumamiriro ezvinhu ehutano hwepachivande huripo munguva dzichangopfuura, pfungwa yeMicrosoft inomutsa zvinetso zvekuchengetedza dhepfenyuro kusvika kune dzimwe makambani akawanda anogona kushanda nekuwana patent pasi peisensi yekuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft yakaburitsa patent uye inoda kupinda zvizere mumusika weVR